960ml/ 72.9/83.3/80mm*205mm 3-ခုပါသော အဖျော်ယမကာ tin အမည်ပေးနိုင်သော ပစ္စည်း DIMENSION(mm) D Bbody INSIDE DIAMETER 83.30±0.15 H အမြင့် 205.10±0.15 နာရီ အကျယ်အဝန်း 205.10±0.15b±20.0d. အထူ 0.20/0.21 BH ကိုယ်ထည်ချိတ် 1.80±0.10 CH အဖုံးချိတ် 1.80±0.10 OL ထပ်လောင်း အရှည် ≥1.00 T ချုပ်ရိုးအထူ 1.20-1.40 OL% OVERLAP NETPERCENT% ≥5TTR
7113#/72.9mm*113mm 3-piece food tin can 7113# ဗူးများကို သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသားများ၊ ရေထွက်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။အင်္ဂါရပ်များ- 1) လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဆိပ်အတောက်မရှိ 2) အစားအစာများကို ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေဘဲ အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။3) အလွန်ကောင်းမွန်သော ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်း 300/300/300*407 3- 7113# အစားအစာလုပ်နိုင်သည်(ယူနစ်):mm NAME ITEM DIMENSION(mm) D ကိုယ်ထည်အတွင်းပိုင်း အချင်း 72.90±0.15 H ပြီးစီးနိုင်သည် အမြင့် 101.50 ±20 ပေ။ 0.10 W ချုပ်ရိုးအရှည် 2.7...
6113# 330ml အဖျော်ရည်ဗူး
6113#330ml 206/211/209*407 3-pc အဖျော်ယမကာ tin အမည်ပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်း DIMENSION D ကိုယ်ထည်အတွင်းပိုင်း အချင်း 65.3±0.15 H အမြင့် 113±0.15bFLANGE အကျယ် 0.015 မီတာ 2. BH ဘော်ဒီချိတ် 1.95±0.10 CH အဖုံးချိတ် 1.95±0.10 OL ထပ်လောင်း အရှည် ≥1.00 T SEAM အထူ 1.30±0.05 OL% အထပ်ထပ် ရာခိုင်နှုန်း ... ≥50% TR% တင်းကျပ်မှု% 136% ≥05 LNET
5133#/52.3mm*133mm အဖျော်ယမကာဘူး3ခု အမည်ပေးနိုင်သော ပစ္စည်း DIMENSION(mm) D ကိုယ်ထည်အတွင်းပိုင်း Diameter 52.30±0.15 H အမြင့် 132.90±0.15bFLANGE WIDETH. အရှည် 2.000 ± 1.40 မိနစ် ကျယ်ဝန်းသည်။ /0.15 BH ဘော်ဒီချိတ် 1.80±0.10 CH အဖုံးချိတ် 1.65±0.10 OL ထပ်လောင်း အရှည် ≥1.00 T SEAM အထူ 1.20-1.40 OL% အထပ်ရာခိုင်နှုန်း ... ≥50% TRC% တင်းကျပ်မှု 5ml 70% တင်းကျပ်မှု
539#/52.3mm*39mm 3-ချပ်စာ ခဲဗူး (ယူနစ်):mm (NAME) ပစ္စည်း DIMENSION D ကိုယ်ထည်အတွင်းပိုင်း Diameter 52.30±0.15 H အမြင့် 39.15±0.15bFLANGE အကျယ် 0.0d ± 2.0d ကိုယ်ထည်နံရံ ထူထူ 0.14/0.15 BH ကိုယ်ထည်ချိတ် 1.85±0.10 CH အဖုံးချိတ် 1.65±0.10 OL ထပ်လောင်း အရှည် ≥1.00 T SEAM ထူ 1.00±0.05 g ≥ 5% ကြမ်းခင်း 7% ကြမ်းခင်း 7% တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ≥ 5% ကြမ်းခင်း 7%
401#/99mm*124mm အစားအစာသွပ် ၃ ခု
မော်ဒယ် No.401# ဗူးများကို အာဟာရမှုန့်၊ ငံပြာရည်၊ အသားများကဲ့သို့သော စည်သွပ်ဘူးအမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဗူးအတွင်းရှိ အစားအစာတန်းယွန်းသည် tinplate ၏ အက်စစ်ဓာတ်များ ချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။အဖုံးအမျိုးအစား- စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းအတွက် အဖွင့်/လက်စွပ်ဆွဲရ လွယ်ကူ MOQ: 15000pcs မော်ဒယ် 202# 211# 300# 307# 401# 404# 603# Dia(mm) 52.3 65.3 72.9 83.3 98.9 1055 15-15 mm. 200 40-200 42-205 43-150 43-150 68-250 အချို့သော ဖောက်သည်များသည် cu...
လက်ဖက်ခြောက်သေတ္တာ, စီဒီအစွပ်အလွတ်များ, စိတ်ကြိုက် Tin Box, Tin Cosmetic Containers, စီဒီ အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ရပ်မှန်, အဖုံးပါသော သတ္တုသိုလှောင်အိတ်,